Galaxy S7 edge | SM-G935FZDUXSP | Samsung Myanmar
Water & dust resistant with IP68 rating* Brighter f1.7 lens for low light performance Professional-grade Dual Pixel Sensor
အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ အမှတ်တရတွေ မျှဝေပုံကို လုံးဝ ပြောင်းလဲလိုက်ပါပြီ။ ဖုန်းတစ်လုံးလုပ်နိုင်တာထက်ကို သာလွန်သွားပါပြီ။ ဒါဟာ ဖုန်းတွေအတွက် ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကြီးပါပဲ။ *Gear 360 နှင့် Gear VR အကြောင်း ပိုမိုသိလိုပါက Click နှိပ်ပါ။
ဖုန်းအသစ် တစ်လုံးဖြစ်ရုံပဲမဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်းတစ်လုံးက ဘာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်လဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတွေးအမြင်အသစ်တွေ ယူဆောင်လာတာပါ။ သင်က ဖြစ်နိုင်ချေတွေကို သတ်မှတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့က ဖုန်းတွေကို ပြန်လည် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုလိုက်တာပါ။ Galaxy S7 4G+ နှင့် S7 edge 4G+ ဖုန်းတစ်လုံးက ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။
ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးလိုက်တဲ့ အလှအပကတော့ Screen Size ကြီးကြီးနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ သင့်လက်ထဲက ပါးလွှာတဲ့ ခံစားမှုပါပဲ။ အရှေ့နှင့် အနောက်ရှိ သေသပ်လှပတဲ့ ကောက်ကြောင်းတွေက သင့်လက်ဖဝါးနဲ့ဆို ကွက်တိပါပဲ။ ကြည့်လို့လဲ လှသလို၊ သုံးလို့လဲ ကောင်းပါတယ်။
တချို့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အမှတ်တရတွေက မှောင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါလေးကတော့ အမှောင်ထဲမှာတောင် ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ဓာတ်ပုံကောင်းတွေကို ရစေမယ့် အဆင့်မြင့် Dual Pixel Sensor ပါတဲ့ ပထမဦးဆုံး Smartphone Camera ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Galaxy S7 4G+ နှင့် S7 edge 4G+ တို့နဲ့ဆိုရင် လှပတဲ့ ညလေးကို သင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။
အသုံးပြုထားတဲ့ ဂိမ်းထိန်းချုပ်မှုစင်တာနှင့် ဂိမ်းအသံဖမ်းစနစ်တွေနဲ့ Mobile ဂိမ်းများကို ပိုမို ကောင်းမွန်စွာ ဆော့ကစားနိုင်ပါပြီ။ Galaxy S7 4G+ နှင့် S7 edge 4G+ တို့၏ အားကောင်းသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကြောင့် ဂိမ်းဆော့ရတာ ပိုမို လက်တွေ့ဆန်လာတယ်။
Star Wars ™: Galaxy ၏ သူရဲကောင်းများ
STAR WARS ⓒ & TM 2015 Lucasfilm Ltd. မူပိုင်ခွင့်များ ရယူပြီး။ ဂိမ်းကုဒ်နှင့် ရုပ်ထွက်၊ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းⓒ 2015 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, and Capital Games များဟာ Electronic Arts Inc ၏ အမှတ်အသားများ ဖြစ်ပါသည်။"
အားကောင်းသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ရှိသောကြောင့် Galaxy S7 4G+ နှင့် S7 edge 4G+ တို့ကို လျှင်မြန်လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး microSD card ရှိ အချက်အလက်များကိုပါ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပို၍ ကြီးမားသော Battery ဖြစ်ပေမယ့်လည်း လျှင်မြန်စွာ အားသွင်းနိုင်ဆဲပါပဲ။
ရေအနက် ၁.၅ မီတာအောက်ပဲ ရောက်ရောက်၊ နာရီဝက်ကျော်ပဲ ကြာကြာ၊ သင်သွားတဲ့ နေရာတိုင်းကို Galaxy S7 4G+ နှင့် S7 edge 4G+ က လိုက်နိုင်ပါပြီ။ Micro USB အပေါက်၊ နားကြပ်ပေါက်တို့မှ လွဲပြီး တခြားအစိတ်အပိုင်းများကို သေချာ အလုံပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့် အပို ဖုန်းအကာအကွယ်တွေ ယူဖို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ရှုပ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။
ဖုန်နှင့် ရေစိုဒဏ် ခုခံနိုင်အား (IP68 အဆင့်) ဆိုသည်မှာ ဤဖုန်းသည် ရေအနက် ၁.၅ မီတာ ခန့်တွင် နာရီဝက်ကျော် ကြာသည်အထိ ရေစိုခံနိုင်ပြီး ဖုန်များ ဝင်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အသိအမှတ်ပြုထားသော စစ်ဆေးမှုရလဒ်များသည် တစ်ဦးခြင်းဆီ စစ်ဆေးမှုရလဒ်များနှင့် ကွာခြားမှု ရှိနိုင်သည်။
မှတ်သားရန်: IP68 အဆင့်ရှိခြင်းသည် ဤဖုန်းသည် အချိန်ပြည့် ရေစိုခံနိုင်သည်ဟု မဆိုလိုပေ။
အရင်ကထက်စာရင် အခု ဖုန်းကို အသုံးပြုချိန် ပိုမို ကြာလာတဲ့အတွက် တစ်ခဏ တစ်ချက် ထိလိုက်ရုံနဲ့ သင်လိုချင်တာကို ရဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ နည်းလမ်းလေးတွေ အမြဲ ရှာနေပါတယ်။ ဒီ Shortcut လေးတွေက သင့်အား နေရာတိုင်းကို ခေါ်ဆောင်သွားမှာပါ။
Galaxy S7 4G+ နှင့် S7 edge 4G+ တို့အတွက် အပိုပစ္စည်း ကောင်းကောင်းလေးတွေ သီးသန့် ထုတ်ထားပါတယ်။ ကာကွယ်ရုံထက် ပိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ ဖုန်း Case လေးတွေမှ စ၍ ဘယ်ကိုပဲရောက်ရောက် ဖုန်းကို အားမြန်မြန်သွင်းပေးမဲ့ အားသွင်းကြိုးတွေအထိ အစုံ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
Samsung KNOX. ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုထားတဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်က ပုံမှန် update လုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ Hackers နှင့် Malware တို့၏ ရန်မှ အချိန်ပြည့် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ KNOX Enabled App ရဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်ကတော့ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို သီးသန့် လျှို့ဝှက် သိမ်းဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Smart Switch. ဖုန်းများတွင် ဓာတ်ပုံများ၊ ဖိုင်များနှင့် အချက်အလက်များမရှိပါက ဘာအဓိပ္ပါယ်မျှ ရှိမည် မဟုတ်ပေ။ အရင် ဖုန်းဟောင်းမှ လိုအပ်သော အရာတိုင်းကို Galaxy S7 4G+ (သို့) S7 edge 4G+ သို့ Samsung Smart Switch app လေးသုံးပြီး ကူးပြောင်းနိုင်ပါပြီ။ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်နော်။
ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မှုသည် ဖုန်း ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားပါသည်။ ဘူးထဲတွင် USB ကြိုး ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ .
"မှတ်သားရန်: အချို့သော အသုံးပြုပုံ၊ဝန်ဆောင်မှုနှင့် application များ (4G+ LTE အပါအဝင်) သည် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုအပေါ် မူတည်သည့်အတွက် တချို့သော ဒေသများတွင် အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ အပို အချက်အလက်သုံးစွဲခများကို ကောက်ခံမည် ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ချက်များသည် ပုံနှိပ်သည့်အချိန်တွင် မှန်ကန်တိကျပြီး ကြိုတင်သတိပေးချက်မရှိပဲနှင့်လည်း ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ဖော်ပြထားသော အခြား ကုမ္ပဏီများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုနာမည်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်သူများ၏ အမှတ်အသားများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံများမှာ သရုပ်ဖော်လိုသော ရည်ရွယ်ချက်နှင့်သာ အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ©2015 Samsung Electronics Co. Ltd"
*Water and Dust Resistant (IP68 rating) means that the device is protected against entry of solid foreign objects and harmful ingress of water at up to 1.5 metre for up to 30 minutes, under certain conditions defined test conditions. According to accredited test results; individual results may vary.
Note: IP68 rating does not mean that device is waterproof.
**Size and weight may vary depending on product configuration and manufacturing process.
Screen images are simulated and for illustration purposes only. ©2016 Samsung Electronics Co. Ltd.